Sergiev Posad. Okubonwayo komuzi.
idolobha Russian of Sergiev Posad Sekuyisikhathi eside ayedume kube iparele Golden Ring. Umsunguli wawo - Sergiy Radonezhsky. Lapha wakha owaziwa kulo lonke Russian Holy Trinity Monastery, okuyinto namanje endaweni pilgrim ngokuvakashela.
Lesi sikhungo zokuphatha itholakala elingekude kangako neMoscow, yingakho izivakashi sebeqala uhambo emhlabeni izikhumbuzo lasendulo lingumuzi Sergiev Posad.
Into ebaluleke kakhulu lesikhumbuzo zomlando zomuzi - Holy Trinity uSergiyu Lavra. Lena sezindela amadoda, eyasungulwa ngo-ngekhulu le-14. Namuhla eziyinkimbinkimbi kuhlanganisa izakhiwo angaphezu kwamashumi amane izikhumbuzo kanye. Lesi sakhiwo endala azithele ngabandayo - Holy Trinity Cathedral - isampula rannemoskovskogo ezimhlophe itshe izakhiwo. Lapha izinsalela St. uSergiyu. Kulesi lombhishobhi senzeka umbhaphathizo izikhulu ovelele eMoscow, lapho baye babusiswa ukubusa Basil 3 no-Ivan Grozny, futhi izingane zabo. Daniel Black futhi Andrei Rublev zazenziwa ngaphakathi imidwebo, okuyinto lihlotshiswe umfire. Sergiev Posad idume ngokuba ethempelini isithonjana odumile Andrei Rublev "Ziqu-zintathu", sise iconostasis.
Ngesiqondiso Ivan le Kubi wokukhumbula ubunye Astrakhan futhi Khanate Kazan namazwe Russian Assumption Cathedral yayakhiwe endaweni ephathelene nokuphatha izindela. He is wumphakathi kusihlwa futhi isevisi ekuseni kuphela, lonke okokufaka ivaliwe kwezivakashi.
Qu-zintathu nomphefumulo Assumption Cathedral - akukhona konke idume the Holy Trinity Lavra e Sergiev Posad. Kokubona ka wezindela ahlukile ngempela. Budebuduze isonto ethuneni umndeni Godunov. Iyisonto izinsalela Tsar Boris nomkakhe uMaria izingane zabo. Muva nje, baqala bangcwabe basemasontweni Russian.
Ngekhulu le-15, nabakhandi kusuka Pskov ensimini ka wezindela lakhiwa oNgcwele Spirit Church.
Chamber of Umbhishobhi elise mitropolitskih emakamelweni. Sakha kubo ngesikhathi esifanayo nge Refectory - yindawo lapho izindela sisadla ngamaholide ezinkulu. Ngokushesha etholakala ngamakamelo ukudla nsuku zonke.
UZiqu-zintathu Lavra e Sergiev Posad ezikhangayo zingatholakala abayenzayo. Lokhu futhi Red Tower, futhi-Church of the Blessed Virgin Mary, kanye esontweni Smolensk, indlwana, sacristy, nabanye.
Enye indawo ethandwa izivakashi - ke Chernihiv sezindela, owaziwa ngokuba emihumeni yayo ngomshoshaphansi. Kukhona isithonjana UnguNina KaNkulunkulu Chernihiv. Indawo labalulekile eluLwimi Ensemble yezakhiwo kuyo lakhiwa ithempeli kwekhulu le-19 ka-Chernigov. Futhi ogwini Konchury amasonto amabili - Vvedensky futhi Pyatnitskaya futhi Chapel Pyatnitsky kahle eziyizitezi eziningana, ayemi ngaphezu entwasahlobo zamanje.
Echaza ezikhangayo Sergiev Posad, akukwazi alisho lutho olunye impophoma ngokuthi "Gremyachiy" 25 amamitha eliphezulu. Lokhu amanzi Sekuyisikhathi eside kubhekwe ukuba zokwelapha. Eduze yesonto behlonipha Sergiya Radonezhskogo kanye ifonti, okungase eziphonsa ubani.
Adume ngaphezulu Sergiyev Posad? Izikhangibavakashi yalumuzi - Museum. Mayelana 30 ayizinkulungwane ziphephile Museum ine amathoyizi. Nazi izingane amakhanda, Domino French kanye Checkers, isiShayina amathoyizi eyenziwe ngobumba, onodoli Japanese , kanye nabanye. Ngaphezu ukuhlola i-eziningi Museum amaqoqo, izivakashi angakha siqu lokushutheka onodoli bawo noma ukudlala Bogorodsk ithoyizi. Lolu hambo ngeke abashiye nandaba futhi izingane noma abadala.
Umlando kanye art Museum inikeza iqoqo elikhulu kunawo yobuciko lasendulo. Lapha ungakwazi ukufunda izinto eziningi ezithakazelisayo kusukela emlandweni yomuzi kanye izindawo zokudoba ezahlukene bekwi umhlaba Russian ezinsukwini zakudala.
Sergiev Posad has mayelana 250 izikhumbuzo. Nazi 50 esebenza Izindlwana kanye namasonto, ehlehlela nasezindaweni ezizungezile kanye esiyingqayizivele umoya umoya aphakeme.
Kufanele yini ngiye UAE ngoMashi, abahambi Izibuyekezo
Spray gun for compressor: ukukhetha, izici, ukubuyekezwa